ယူနိုက်တက်ကနေထွက်ခွာပြီးတဲ့နောက်ဘာဆက်လုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာစိတ်မကောင်းစွာပြောပြခဲ့တဲ့ အီဂါလို – 7Day Update News
by Ye Htet
ဒီတိုင်းဆိုယူနိုက်တက်တို့ ဖလားမရနိုင်သေးပါဖူး လို့ပြောဆို သွားခဲ့တဲ့ အင်ဒီကိုလ်း
အီဂါလိုဟာ ယူနိုက်တက်အသင်းကို တရုတ်ကလပ် ရှန်ဟိုင်းရှင်ဟွာအသင်းကနေ အငှားစားချုပ်နဲ့ လာရောက်ကစားနေတာဖြစ်ပြီး ယခုဇန်နဝါရီလ ကုန်ဆုံး ချိန်မှာတော့ အသင်းကနေ ထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ယူနိုက်တက်အသင်းဘက်ကလည်း အီဂါလိုကို အငှားစာချုပ်သက်တမ်းကို ဆက်လှမ်းတိုးမြှင့်မှာ မဟုတ်ကြောင်းလဲ သိရပါတယ်။ဒါကြောင့် အီဂါလိုက တော့ ယူနိုက်တက်ကနေ ၎င်း ထွက်ခွာပြီးနောက်မှာ ဘာတေ ဆက်လုပ်နိုင်တယ် ဆိုတာ ကို ဆက်လက်ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ အီဂါလိုဟာ ရှန်ဟိုင်းအသင်းမှာ စာချုပ်သက်တမ်းဟာ ၂၀၂၁ အထိ ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သို့ပေမယ့် အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် အီဂါလိုက နောက်လာမယ့် ၎င်းရဲ့ အနာဂါတ်ဟာ ယူနိုက်တက်စတိတ် မှာဖြစ်နိုင်ကြောင်းကို အောက်ပါအတိုင်းပြောပြသွားပါတယ်။အီဂါလိုကESPN နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ” ကျနော် ဒီမှာမကြာခင်စာချုပ်ကုန်ဆုံးပါတော့မယ်။ကျနော်ဒီမှာ ဆက်နေခြင်ပါသေးတယ်။ကျနော်ကအသင်းရဲ့ ထာ၀ရ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ပါ။တစ်ဘ၀လုံး ကိုပြောတာပါ။ကျနော် အခု MLS ကို စောင့်ကြည့် နေပါတယ်။သူတို့ တေ လိဂ်က အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကျနော် MLS မှာ ကစားခြင်ပါတယ်””ကျနော့်ကို ကမ်းလှမ်းလာမယ့် အခွင့်အရေးကို ကျနော်စောင့်နေပါတယ်။အခွင့်ရလာရင် အမိအရဆုပ်ကိုင်သွားမှာ ပါ။ဘာလို့ဆို အဲ့မှာကောင်းမွန်တဲ့ ဘ၀ကို ရရှိနိုင်လို့ပါ။ကျနော် ဒါကို ချစ်ပါတယ်။ဟီဂူရင်၊ဒေါ့ဆန်းတို့စ် တို့လို ကစားသမားတေတောင် သွားကစားနေတာပဲ၊ကျနော်က ရော ဘာလို့ မဖြစ်နိုင်ကမှာလဲ။ကျနော်အခွင့်အ
ရေး ရလာခဲ့ရင် ပိုပြီး အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက် ဖြစ်လာဦးမှာပါ။
ဒေးဗစ်ဘက်ဟမ်းရဲ့ မိုင်ယာမီအသင်းတောင် အတော်လေး ကြီးထွားလာပါပြီ။ဒါကြောင့် ကျနော့်မှာသာ အခွင့်ရေးရရင် သွားကစားဖို့ ဘာလို့ မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲ” ဟု ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ကျနော်တို့ ပေချ့်လေးက တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဆောင်းပါးလေးတေတင်ပေးနေတဲ့အပြင်၊ဝါသနာကိုအရင်းခံပြီးတည်ဆောက်ထားတဲ့ ပေခ်ျ့လေးဖြစ်တာရယ်။ပေါက်ကရလေးဆယ်အခြေမြစ်မရှိတဲ့ သတင်းတေ တင်ပေးနေတဲ့ ပေချ့်လေး မဟုတ်တာရယ်ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ချ စွာသတင်းတေ ဖတ်ရှုခြင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီ—Man U Fan Forever— ဆိုတာလေးကို နှိပ်၀င်ပြီး like and Follow ၀င်လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်နော်။
အီဂါလိုဟာ ယူႏိုက္တက္အသင္းကို တ႐ုတ္ကလပ္ ရွန္ဟိုင္းရွင္ဟြာအသင္းကေန အငွားစားခ်ဳပ္နဲ႔ လာေရာက္ကစားေနတာျဖစ္ၿပီး ယခုဇန္နဝါရီလ ကုန္ဆုံခ်ိန္မွာေတာ့ အသင္းကေန ထြက္ခြာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ယူႏိုက္တက္အသင္းဘက္ကလည္း အီဂါလိုကို အငွားစာခ်ဳပ္သက္တမ္းကို ဆက္လွမ္းတိုးျမႇင့မွာ မဟုတ္ေၾကာင္းလဲ သိရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ အီဂါလိုက ေတာ့ ယူႏိုက္တက္ကေန ၎ ထြက္ခြာၿပီးေနာက္မွာ ဘာေတ ဆက္လုပ္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာ ကို ဆက္လက္ေျပာျပသြားခဲ့ပါတယ္။ အီဂါလိုဟာ ရွန္ဟိုင္းအသင္းမွာ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းဟာ ၂၀၂၁ အထိ ရွိေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
အိုလီကတော့ ခင်ဗျားတို့ကို ဟားတိုက်ပြီးရယ်နေလောက်ပြီလို့ပြောသွားခဲ့တဲ့ ဘာဘာတောပ့်
သို႔ေပမယ့္ အသက္ ၃၁ ႏွစ္အ႐ြယ္ အီဂါလိုက ေနာက္လာမယ့္ ၎ရဲ႕ အနာဂါတ္ဟာ ယူႏိုက္တက္စတိတ္ မွာျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာျပသြားပါတယ္။အီဂါလိုကESPN နဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမွာ ” က်ေနာ္ ဒီမွာမၾကာခင္စာခ်ဳပ္ကုန္ဆုံးပါေတာ့မယ္။က်ေနာ္ဒီမွာ ဆက္ေနျခင္ပါေသးတယ္။က်ေနာ္ကအသင္းရဲ႕ ထာ၀ရ ပရိတ္သတ္တစ္ေယာက္ပါ။တစ္ဘ၀လုံး ကိုေျပာတာပါ။က်ေနာ္ အခု MLS ကို ေစာင့္ၾကည့္ ေနပါတယ္။သူတို႔ ေတ လိဂ္က အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။က်ေနာ္ MLS မွာ ကစားျခင္ပါတယ္””က်ေနာ့္ကို ကမ္းလွမ္းလာမယ့္ အခြင့္အေရးကို က်ေနာ္ေစာင့္ေနပါတယ္။အခြင့္ရလာရင္ အမိအရဆုပ္ကိုင္သြားမွာ ပါ။ဘာလို႔ဆို အဲ့မွာေကာင္းမြန္တဲ့ ဘ၀ကို ရရွိႏိုင္လို႔ပါ။က်ေနာ္ ဒါကို ခ်စ္ပါတယ္။ဟီဂူရင္၊ေဒါ့ဆန္းတို႔စ္ တို႔လို ကစားသမားေတေတာင္ သြားကစားေနတာပဲ၊က်ေနာ္က ေရာ ဘာလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ကမွာလဲ။က်ေနာ္အခြင့္အေရး ရလာခဲ့ရင္ ပိုၿပီး အေတြ႕အႀကဳံရင့္က်က္တဲ့ ကစားသမားတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာဦးမွာပါ။ေဒးဗစ္ဘက္ဟမ္းရဲ႕ မိုင္ယာမီအသင္းေတာင္ အေတာ္ေလး ႀကီးထြားလာပါၿပီ။
ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ့္မွာသာ အခြင့္ေရးရရင္ သြားကစားဖို႔ ဘာလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ရမွာလဲ” ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့ပါတယ္။က်ေနာ္တို႔ ေပခ်႕္ေလးက တန္ဖိုးရွိတဲ့ ေဆာင္းပါးေလးေတတင္ေပးေနတဲ့အျပင္၊ဝါသနာကိုအရင္းခံၿပီးတည္ေဆာက္ထားတဲ့ ေပခ္်႕ေလးျဖစ္တာရယ္။ေပါက္ကရေလးဆယ္အေျချမစ္မရွိတဲ့ သတင္းေတ တင္ေပးေနတဲ့ ေပခ်႕္ေလး မဟုတ္တာရယ္ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို႔ စိတ္ခ် စြာသတင္းေတ ဖတ္ရႈျခင္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီ—Man U Fan Forever— ဆိုတာေလးကို ႏွိပ္၀င္ၿပီး like and Follow ၀င္လုပ္ထားႏိုင္ပါတယ္ေနာ္။
ယူနိုက်တက်ခံစစ်ရဲ့ အဓိကကျောက်ဆောင်တံတိုင်းကြီးတစ်ခု(သို့) အဲရစ်ဘိုင်လီ
ယူနိုက်တက်ကြယ်ပွင့်ဟာ လိဂ်ရဲ့ အကောင်းဆုံးကစားသမား လို့...
တကယ်လို့ VAR သာမရှိခဲ့ရင် ဒီရာသီမှာ ယူနိုက်တက် တို့...
ယူနိုက်တက် မှထွက်ခွာသွားတဲ့ လင်ဂတ်အကြောင်း အပါအ၀င်...
အာဆင်နယ်ကို တော့ လုံး၀ အနိုင်ကစားရမယ်လို့...
Copyright © 2021. Created by 7Day Update News.
Hosting ဖိုးသွင်းရန် Viber 09799540772 သို့ဆက်သွယ်ပေးပါ